Saturday December 08, 2018 - 14:50:06 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Khilaafka udhaxeeya xukuumadda Xasan Cali Kheyre iyo guddoonka baarlamaanka dowladda Federaalka ayaa soo shaac baxay kadib markii dib loosoo celiyay guddi laxisaabtan ku hayay xukuumadda Kheyre oo dhowaan lakala diray.
Max'med Mursal oo ah guddoomiyaha baarlamaanka ayaa ku dhawaaqay in shaqadooda ay sii wadanayaan xubnaha guddiga maaliyadda baarlamaanka ayna sharci darro tahay in lakala diro.
Qoraal kasoo baxay xafiiskiisa ayuu ku sheegay in uu dib u akhriyay dastuurka u degsaan dowladda Federaalka ayna usoo baxday in sharci darro ay tahay kala diristii guddiga maaliyadda Baarlamaanka wuxuu aad udhaliilay qaabkii guddiga loo kala diray.
Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa xukuumadda Xasan Cali Kheyre ugu baaqay in ay ixtiraamto shaqada baarlamaanka oo uu ku sheegay 'sharci dajiyayaal'.
bishii lasoo dhaafay Cabdi Wali Muudeey oo ku magacaaban guddoomiye ku xigeenka 1-aad ee baarlamaanka ayaa kala diray guddiga maaliyadda oo laxisaabtan adag ku hayay wasaaradda Maaliyadda islamarkaana iftiimiyay in xukuumadda Kheyre ay gashay musuq maasuq iyo xatooyo hanti guud ah.